नेपाल आज | रजश्वलापूर्वको यौन सम्बन्ध कति उत्तम?
रजश्वलापूर्वको यौन सम्बन्ध कति उत्तम?
काठमाडौं– सामान्यतः रजश्वला १० देखि १४ वर्षको उमेरमा भैसक्छ। अधिकांश रजश्वला सामान्य रुपमा चक्रीय प्रणालीमा चलिरहन्छ। कतिपय महिला (र बालिका) को भने रजश्वला भएको अवस्थामा दैनिक क्रियाकलापमा बाधा पर्ने, अन्तरसम्बन्ध बिग्रने, यौन जोडीसँगको सम्बन्ध बिग्रने तथा असामान्य अवस्था आउन सक्छ।
पुरुष यौन जोडीले महिलाको रजश्वला हुनुपूर्वको अवस्था, परिस्थिति विचार गरी यौन सम्पर्कका लागि प्रस्ताव तथा यौन सम्बन्ध राख्न सक्छन्। तर वास्तविक रुपमा शरीर फुलेको अवस्थामा भने तौल बढेको हुन्छ। त्यसैले रजश्वलापूर्व आफ्नो शरीर फुलेको महिलालाई अनुभूति हुन्छ। उनीहरुको शरीर बाहिरबाट हेर्दा सामान्य रुपमा फुलेको देखिन्छ। यसले स्वयं महिलालाई शारीरिक तथा मानसिक रुपमा असहज हुन्छ। जसका कारण शारीरिक तथा मानसिक रुपमा दैनिक क्रियाकलापमा असर पर्ने गर्छ।
रजश्वलापूर्व उत्पन्न हुने समस्याका कारण महिलाको दैनिक क्रियाकलापमा समस्या हुने तथा सम्बन्ध बिग्रने भएकाले समस्याको लक्षण तोकी मापदण्ड बनाइएको हो। रजश्वलापूर्व तनाव व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यौन जोडीसँग मनमुटाव उत्पन्न भई सम्बन्ध नै बिग्रने जोखिम नआउला भन्न सकिन्न। दुईदेखि पाँच प्रतिशत महिलाहरु प्रजनन उमेरमा कुनै कुनै हिसाबले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा दुःख पाइरहेका छन्। रजश्वला हुनुपूर्वको अवस्थामा हुने पीडाले उनीहरुमा उदासिनता निम्त्याउन सक्छ। रजश्वलापूर्व महिलाले देखाउने लक्षण रोग हो वा हैन भन्ने छुट्याउने पाँच वटा रोग निदानका मापदण्ड छन्।
महिलाले रिस तथा झडङ्गेपनको अनुभूति गरे, झगडा गर्ने, अनावश्यक रुपमा निहुँ खोज्नेजस्ता लक्षण देखाउनु समस्याको संकेत हो। खिन्न व्यवहार देखाउनु, आश मार्ने, निन्दनीय विचार उत्पन्न हुनु समस्याको लक्षण हो। रजश्वलापूर्व स्पष्ट चिन्ता, तनाव, उत्सुकताको उत्तरचढाव हुनेजस्ता लक्षण देखिए त्यस्ता महिलामा समस्याको चिह्न तथा लक्षण भएको बुझिन्छ। यी लक्षणबाहेक महिलामा समस्या भएको छ भन्ने यकिन गर्न अन्य दुई वटा लक्षण देखिन जरुरी हुन्छ।